एक वर्षअघि १ खर्ब ७९ अर्ब बचतमा रहेको शोधनान्तर अहिले १५ अर्ब घाटामा :: Setopati
एक वर्षअघि १ खर्ब ७९ अर्ब बचतमा रहेको शोधनान्तर अहिले १५ अर्ब घाटामा २४ प्रतिशतले बढ्यो व्यापार घाटा
मुलुकको शोधनान्तर स्थिति १५ अर्ब १५ करोडले घाटामा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय स्थितिअनुसार यस आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म मुलुकको शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको हो।
जवकि अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ७९ अर्ब बचतमा थियो। मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तरलाई शोधनान्तर स्थितिले जनाउँछ। मुलुकको ब्यापार घाटा बढ्दा पनि शोधनान्तर स्थितिमा असर पर्दछ।
तथ्यांकअनुसार ११ महिनाको ब्यापार घाटा २४. ६ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा १३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात हुँदा नेपालबाट १ खर्ब २१ अर्बको निर्यात भएको छ।
समीक्षा अवधिलाई तुलना गर्दा नेपालको निर्यात ३७.८ प्रतिशतले बढेको छ भने वस्तु आयात २५.७ प्रतिशतले बढेको छ। वस्तुगत आधारमा सोयाविन तेल, अलैंची, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), जुटका सामान, ऊनी गलैंचा लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, दाल, जस्तापाता, तार, चोकर लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ।
आयातमा यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाविन तेल, एम.एस. बिलेट, चामल, दूरसंचारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ।
हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा, कोल्डरोल्ड शिट इन्क्वाइल, चाँदी लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ।
निर्याततर्फ तातोपानी, कञ्चनपुर र रसुवा भन्सार कार्यालय बाहेकका नाकाबाट गरिएको निर्यात वृद्धि भएको छ। आयाततर्फ तातोपानी र रसुवा भन्सार कार्यालयबाहेकका नाकाबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ८.८ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ८.० प्रतिशत रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स १२.६ प्रतिशतले बढेको छ। गत साउनदेखि जेठसम्म ८७० अर्ब ९४ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आय १०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ५९.९ प्रतिशतले घटेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ४७.१ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३१.१ प्रतिशतले घटेको थियो।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ३१, २०७८, १५:००:१५
सोनमको उत्सव सेल अफर सुरु, ८० प्रतिशतसम्म छुट
माउन्टेन मग कफीको आउटलेट पाल्पाको श्रीनगरमा